Kukho mhlawumbi angeke ube nombono ongenanto eyodwa kwiintsapho ezinkulu. Ngeempawu ezintle kunye nokungalunganga kokuhlala kwintsapho apho baninzi abantwana, omnye unokuthetha ixesha elide, kwaye ngexesha ngalinye ukufumana iingxabano ezintsha kunye neentshukumo ekuthandeni intsapho enjalo, okanye ngokulandelelana, ekuboneni amacandelo angalunganga.
Ngokuchanekileyo, umntu unokuthi indlela yokuhlala kwintsapho enjalo - kuphela abo bahlala kuyo bayakwazi. Kuya kubakho ukukhankanya ukuba oku kunzima kakhulu. Yingakho iintsapho ezininzi zixazululwa enye, ubuninzi babantwana ababini.
Okokuqala, intsapho enkulu yinto yokuqala kunye nomthwalo omkhulu kubazali. Ngokuqhelekileyo, ngaphambi kokuba abantwana bancede ubuncinci emancinci ekhaya, umama noba kufuneka batyalise inani elikhulu lemvelo, izixhobo kunye neentsholongwane zokuphuhliswa ngokupheleleyo kwengane. Okwesibini, kubakho ubunzima obuvela xa kubalulekile ukwabelana ngokulinganayo, ukuba ukutya kunye neengubo zilula, ngoko ngezinye iingxaki zivela ngexesha kunye nengqalelo. Yaye into eyona nto isona sisininzi sokuntuleka kwemali, ngakumbi xa abantwana beqala ukufumana imfundo. Kwaye, njengoko kuyaziwa, imfundo yethu yamahhala kunye namayeza ayinancinci.
Ngokubhekiselele kubhajethi yentsapho, eya kuhlala ngoqoqosho kwintsapho enkulu.
Ngubani owokuqala ukuba avuke, ezo kunye ne-slippers.
Enyanisweni, iintsapho zanamhlanje zinezingane ezininzi zithola isixa esithile esivela kurhulumente njengesibonakaliso sokubonga, ngokuphakamisa imeko yesimo sabantu, ukuxhamla njengembuyekezo yokubhalima. Kodwa abo bajamelene nale nto, baqonde ukunyeliseka kwezi zibalo, kwaye kuphela ukuba kubo, akunakwenzeka ukuba baphile. Ngoko ke, abazali kufuneka basebenze kangako ekhaya, kwaye emsebenzini, ngamanye amaxesha kungekhona nakwezinye. Uninzi ubunzima buvela xa abantwana befuna ukubonelelwa ngeengubo.
Ngendlela, nguye onokuba yindlela yoqoqosho kwintsapho enkulu. Kucacile ukuba ukuba kukho abantwana abathathu okanye ngaphezulu kwintsapho, umntu uya kuba nesini esinye ngesondo. Njengoko uyazi, abantwana bakhula ngokukhawuleza, kwaye ngokukhawuleza bakhula kwiingubo zabo kunye nezihlangu. Ukuba ubeka ngokufanelekileyo ukugqoka iimpahla, isizukulwana esincinane siya kunikwa sona. Ewe, kwaye loo mbono yendlela yokugqithisa ngayo umzalwana okanye udade ngokuqhelekileyo uyaziqhelanisa nabantwana abavela kwiintsapho ezinkulu.
Ingakanani imali ngosuku oluya ekuzalweni okupheleleyo kwintsapho enkulu, akunakwenzeka ukuba umntu uya kuthatha isigqibo sokubala. Emva kwakho konke, ukuba uyayitshitshisa yonke imali esetyenzisiweyo ekuzaliseni ifriji, kwinyanga - umphumo ungashatyiswa. Ewe, ukugcina ukutya, kwaye uthenge iimpahla ezinobungakanani, okanye ungathengi naziphi na iimveliso eziyimfuneko ukuthenga ubuncinci - kungekhona ukhetho. Abantwana mabafanele batye ngokupheleleyo, kwaye nabazali nabo, kuba ngemithwalo enjalo, umzimba awuyi kuba neyodwa into yokuzalisa amandla ayo. Kukho ukhetho oluninzi apha, kwaye bobabini banelungelo lomzamo kunye nomzamo wabazali, kunye nokuba, ukuba kunokwenzeka, izalamane zabo.
Inketho yenombolo 1: silungiselela. Amashalofu esitolo azaliswe ngeemveliso ezahlukileyo. Kodwa yonke inkosikazi iyaqonda ukuba nangona umkhiqizo ungumgangatho owamkelekileyo, ixabiso ligqitywa ngokugqithiseleyo. Kuqoqosho kakhulu kwaye kunenzuzo yokupheka yonke into ngokwakho. Kuphela "kodwa", oku, ukupheka kuthatha ixesha. Ukuba kukho abantwana abadala, unako ukuwaheha, kodwa ngelixa abantwana bebancinci, umama kufuneka aphule. Kwiimeko ezinjalo, mayeke, iqabane lakho liya kuqonda kwaye lixolele, kodwa kwimenyu uza kufuneka ukhethe izitya ezilula ezingadingi iindleko ezinkulu zemali kunye nezindleko. Iimpawu zobugcisa oza kuyenza emva koko. Ngaphezu koko, ekhaya, kunokwenzeka ukupheka phantse yonke into, kwaye kwiimeko ezininzi kuvela ngcono.
Inombolo yesi-2: indlu kwidolophana. Indlela yokuhlala ngokukhawuleza kwintsapho enkulu, ngelixa ingagqithisi abantwana kwiimifuno neziqhamo eziyimfuneko? Eqinisile, zikhule ngokwabo. Kungcono, kodwa ukuba ngabazali okanye izalamane zakho zenza oko. Ixesha lokuba abagadi balimi abanomdla-sele begqityiwe, kodwa kusekho abantu abangenakucima ukujongana nale shishini elibukhali. Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abanjalo bavumelana, babelane nawe ngeziqhamo zomsebenzi wabo, ngokukhululekile okanye ngokumodareyitha, okanye mhlawumbi nangomrhumo wokuqeshisa. Kwaye kulo mzekelo, akuyi kuba kuphela ngemveliso yezityalo ezivela kwimvelaphi yezityalo, kunokwenzeka ukhetho kunye nokufumana itafile yeemveliso zobisi, inyama, amaqanda-oku kunceda ukugcina imali efunekayo.
Emva kweentsuku ezininzi zokusebenza, kunye neenyanga zokusebenza rhoqo, wonke umntu ufuna ukuphumla. Ukuba ezininzi iintsapho ezingenabantwana, okanye ukuba nazo, kodwa iholide enye ehlaselayo, iholide kunye neveki zibonwa ngovuyo. Ukuba kwintsapho enkulu, ngamanye amaxesha inokubangela ukuba iqhube. Emva kwakho konke, abantwana ngexesha lokuphumla badinga into yokwenza, kwaye ehlobo nakwezinye indawo ukuqhuba, bafuna ukunakekelwa. Kwaye ukuba xa iintsuku eziqhelekileyo zinyamekelwa ngutitshala okanye esikolweni, ngosuku lokuphuma kunye neeholide abantwana abasalayo kunye nabazali babo yonke imihla. Ngako oko, abazali bafuna okungenani ukuphumla, nokubuyiswa kwamandla. Ungaba njani kule meko?
Ngokuqhelekileyo ezinjalo kwiintsapho zasehlotyeni okanye ngelixesha leeholide uhulumeni unikezela iifowu zeenkampu zempilo kunye neendawo zesikhumba. Apho, abantwana bachitha ixesha labo, kwaye kaninzi bavuya kakhulu. Utshintsho kwimeko kwaye iqela elitsha linenzuzo kubantwana, kunye nabazali abangathi bodwa banokuhlala bodwa, kwaye balala nje.
Buyela ekhaya kwidolophana. Ukuba unaloo thuba, ukuxubusha abantwana ngeholide okanye ikhefu kubazali noomkhulu-yenza njalo. Ingakumbi ukuba abazali bakho bahlala kude nomzi. Umoya omtsha, ixesha elisebenzayo, iziqhamo kunye nemifuno ngokukhawuleza ukusuka kwintsimi - iya kubachaphazela abantwana bakho bhetele kunanoma yiyiphi na indawo. Ngelo xesha, iholide enjalo ayiyi kuhlawula nayiphi na into. Musa ukwesaba, ukhulule abazali bakho. Kwiimeko ezininzi, abantwana abavela kwiintsapho ezinkulu bayazimeleyo, kwaye oogogo baya kuvuyiswa yizo zonke iingxaki ezincinane.
Kunzima ukuhlala kwezoqoqosho kwintsapho enkulu, ngexesha elinye, ukuzama ukuqwalasela iimfuno zabantu bonke. Kodwa njengokuba kukho ukubonisa, oku kunokwenzeka. Musa ukuzisola ngezenzo ozenzayo, kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuba kutheni, okanye ukuba ngubani owenzayo.
Mntu, ndihluphekile, kodwa
Indlela yokufunda ukugcina uhlahlo lwabiwo-mali
Ikhukhi kunye ne-espresso kunye ne-tshokoleta
Utywala lwemithi: i-cocklebur
Indlela yokusebenzisa i-sinamoni yokulahleka kwesisindo
Indlela yokuziphindezela umntu ngenxa yobuthakathaka